Fanitarana ao amin'ny iOS 8: farany dia misokatra ho an'ny mpamorona | Vaovao IPhone
Fanitarana ao amin'ny iOS 8: farany misokatra ho an'ny mpamorona i Apple
Apple dia manomboka manatanteraka izay nampanantenainy herintaona lasa izay, raha i Tim Cook mihitsy no nanome toky fa hisokatra tsikelikely ho an'ny mpamorona izany manome azy ireo fidirana amin'ireo fiasa natokana ho an'io fotoana io amin'ny rafitra ary tsy misy fanovana azo atao. Amin'ny fahatongavan'i iOS 8, ny mpamorona voalohany dia hanana fitaovana marobe ahafahan'izy ireo manao ny fampiharana azy ireo ho mahery vaika kokoa, hampiasa tsara ny loharanom-pahalalana ary hanova ny lafiny amin'ny rafitra mihitsy aza. Nisy zavatra tsy azo eritreretina, roa taona lasa izay, tonga tao amin'ny iOS ihany, ary na dia ny widgets sy ny klavier aza no mpandray anjara fototra taorian'ny Keynote, misy ny fanitarana hafa izay tena manandanja tokoa. Manazava izany amin'ny antsipiriany eto ambany izahay.
1 Widget ao amin'ny Ivotoerana fampandrenesana
4 Mpanonta sary
5 Fitehirizana rakitra
6 Mpaka sary
Widget ao amin'ny Ivotoerana fampandrenesana
Tonga amin'ny iOS ihany ny Widget, ary na dia tsy manao izany araka ny itiavan'ny maro aza izy ireo dia zava-bita lehibe tokoa. Apple dia hamela ny mpamorona hampihatra ny azy ireo widgets ao amin'ny Notification Center, dia hamela anao hisafidy ireo widgets tianay hapetraka ary izay tsy tianay hiseho, na dia mamela anay hanafina ireo izay atolotry ny rafitra aza. Ny efijery "Androany" an'ny Notification Center dia tsy ho zava-poana intsony ary hamela antsika indray mipi-maso hahita ny valin'ny ekipa ankafizinay, ny fampahalalana amin'ny antsipirihany momba ny toetrandro na izay tian'ireo mpandrindra ampidirina.
Iray amin'ireo fandrosoana lehibe izay takian'ny maro amintsika hatry ny ela. Ny keyboard iOS dia mihatsara amin'ny alàlan'ny kinova vaovao amin'ny rafitra. Nandritra ny andro nandinihako ny iOS 8 tao amin'ny iPhone-ko, ny kitendry azo vinavina dia fandrosoana lehibe, ary ny teny sosokevitra dia mijanona tsy manelingelina tena manampy. "Manan-tsaina" koa izy io ary mianatra rehefa mampiasa azy, lasa mahazo aina rehefa manoratra. Fa io koa dia avelan'ny Apple hamorona keyboard ho an'ny iOS, Ka Swiftkey na Fleksy dia ho zava-misy tsy ho ela, rehefa ampahibemaso ny iOS 8, ary afaka misafidy isika raha te hampiasa ny kitendry iOS mahazatra na hametraka ny iray amin'ireny tabilao malaza ireny amin'ny sehatra hafa. Afaka manapa-kevitra ihany ny mpampiasa amin'ny farany.
Raha te hahalala tsara an'ity fanitarana ity dia tsara kokoa ny mahatadidy ny ohatra nasehon'i Apple tamin'ny famelabelarana: ao anatin'ny Safari, nisy lahatsoratra voafantina ary noho io fanitarana io dia azo atao ny mandika lahatsoratra amin'ny fiteny hafa amin'ny alàlan'ny Bing. Raha atao teny hafa, ny hetsika dia mamela ny fampitomboana ny asan'ny fampiharana iray noho ny fampiharana ivelany hafa.
Ny rindranasa iOS Photos dia ahafahan'izy ireo manova amin'ny sivana sy fitaovana samihafa, izay nitombo sy nohatsaraina tao amin'ny iOS 8. Fa raha te hampiasa fampiharana hafa ianao hanovana ny sarinao, dia tsy maintsy apetrakao hatreto ny rindranasa , omeo fidirana ao amin'ny tranombokinao izany, ampidiro ao anaty rindranasa ireo sary ireo ary amboary avy eo. Indraindray dia misy andian-dingana tsy ilaina izay mahatonga ny asa ho mandreraka be. Ao amin'ny iOS 8, tsy mivoaka ny fampiharana iOS Photos azonao atao ny mampiasa ny fitaovana fanovana amin'ny fampiharana tianao indrindra ary tehirizo ao amin'ny tranombokinao manokana ny valiny.
Misaotra an'ity fanitarana ity ny serivisy an'ny cloud storage dia azo ampidirina ao amin'ny iOS, ary ny rindranasa izay miditra amin'ny fisie dia afaka misafidy izay mpamatsy hahazoana ilay fampahalalana. Hanamora kokoa ny fiaraha-miasa amin'ireo rafitra fitehirizana samihafa ao anaty rahona izany, raha vantany vao nisy serivisy toy ny Dropbox, Box, OneDrive ary ny toy izany dia namorona ny fanitarana azy ireo ary tafiditra ao anatin'ny rafitra. Ho mora kokoa ihany koa ny mifindra rakitra eo anelanelan'ny serivisy samihafa.
Ity fanitarana ity dia mamafa ny tsipika mena napetrak'i Apple hatramin'ny nanombohany: ny fasika. Hatramin'izao, ny fampiharana tsirairay dia namorona ny tontolo iainany (boaty fasika) ahafahany miasa, saingy tsy azo nidirana tamin'ny fampiharana hafa, ary tsy afaka miditra amin'ilay iray hafa. Ankehitriny ny iOS 8 dia hamela ny rindranasa hizara angon-drakitra amin'izy samy izy, mandalo hatrany amin'ny rafitra mihitsy, izay hiantoka ny fiarovana sy ny fiainana manokana ny angon-drakitra.
Ity dia santionany kely fotsiny amin'ny zavatra ho vitan'ny mpamorona amin'ny iOS 8, ary ny fomba hanovana ny fisainantsika ny iOS. Fahombiazana izay tadiavinay hatry ny ela ary efa natomboka izany. Enga anie handroso hatrany miaraka amin'ireo fanavaozana vaovao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 8 » Fanitarana ao amin'ny iOS 8: farany misokatra ho an'ny mpamorona i Apple
Fiheverana voalohany momba ny iOS 8 amin'ny iPad